«Mataanaha» - istaraatijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah | vfxAlert official blog
«Mataanaha» - istaraatijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah
Falanqaynta farsamada, waxaa jira sharci: markasta oo ay sii weynaato waqtiga, calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee lagu kalsoonaan karo . Laakiin waxaad si guul leh uga ganacsan kartaa tilmaamayaasha aasaasiga ah iyo xulashooyinka muddada-gaaban, sida istiraatiijiyadda "Mataanaha".
Ubax Bill Williams tilmaame kaas oo go'aamin doona isbedelka hadda socda ama maqnaanshihiisa. Waa seddex celcelis guuritaan leh eexasho ka duwan qiimaha hadda jira. Dhaqdhaqaaqa dambe ee dhammaan khadadka ayaa muujinaya maqnaanshaha isbeddel, waxaan ku sii nagaaneynaa banaanka suuqa.
RSI oo leh muddo 14 ah iyo heer dheeri ah oo 50. Tilmaamayaasha isbeddelka waa in daruuri lagu xaqiijiyaa ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaysa xaalad xad dhaaf ah marka iibsadayaashu aysan mar dambe u sii dhaqaajin karin qiimaha kor u qaadista ama ka badbadin, halkaas oo aysan jirin cid ugu dhow suuqa ku iibso qiimo jaban.
Ikhtiyaar CALL . Dhammaan khadadka Alligator waxaa loo hagaajiyaa xagga sare, xarunta feedhka ee RSI iyo heerka 50 xagga hoose ilaa kor.
Dooro door . Xaaladaha iska soo horjeedda: RSI waxay ka baxeysaa aagga xad dhaafka ah waxayna ka gudubtaa heerka 50 min kor ilaa sare. Dhammaan khadadka Alligator ayaa iyaguna hoos u dhacaya.
Marba marka ka dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, waxaa sii kordheysa suuragalnimada isbadal xoog leh ka dib dhameystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad furi kartaa ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee dib u celinta Alligators (sida ku cad sawirka) iyo calaamadaha ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ka socda vfxAlert;
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, RSI marar dhif ah ayey tagtaa aagagga xad dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii Alligator iyo RSI ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
Istaraatiijiyadda intraday «Twin» waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo xagjir ah oo xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!
Ganacsi otomaatig ah marka loo eego istiraatiijiyadda "Pathfinder" waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah ayaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, waxaa fiican in gacantan lagu kala iibsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.